Hividy vovobony kalsioma (459789-99-2) hplc≥XXX% | AASraw
SKU: 459789-99-2. Sokajy: R & D Reagents
Ny AASraw dia miaraka amin'ny fahaizana sy ny famokarana maimaimpoana avy amin'ny gram ka hatramin'ny filamatry ny volon-koditra Obeticholic Acid (459789-99-2), eo ambany fifehezan'ny CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
Vovobony asetikôtika dia ampiasaina amin'ny fitsaboana ny PBC amin'ny olon-dehibe ary indraindray miaraka amin'ny zava-mahadomelina hafa antsoina hoe ursodeoxycholic asid (UDCA). Ny cholangitis fototra biliary (PBC) dia aretina ateraky ny areti-mandringana izay manimba tsikelikely ao anaty atiny.
Lahatsary vovoka poety Obeticholic
Vovon-tsakafo Obeticholic ireo karazana fototra
Name: Vovon-tsakafo Obeticholic
Formula Molecular: C26H44O4
Meny fitetezana 420.63
Vovon-kisoa Obeticholic amin'ny fampiasana Antineoplastic Agent
Generic Name: Vovon-tsakafo Obeticholic (oh BET i KOE lik AS id)
Fampiasana vovoka azôty ara-kolo
Ity fanafody ity dia ampiasaina irery na amin'ny fikarakarana miaraka amin'ny aretina ateraky ny aretin-tsaina (primaria biliary cholangitis-PBC). Io aretina io dia manimba tsikelikely ny valanorano ao anaty atiny. Rehefa simbana ny valanorano, dia mety hampitombo ny voka-dratsiny amin'ny atiny sy ny atiny ny atiny. Ny vovon'ny kôkôtôa azôty ara-kolo dia miasa amin'ny fikajiana ny aty mba hahatonga azy ho malemy, ary amin'ny fanampiana ny fery mangotraka avy amin'ny aty. Ny volo-pokontany Obeticholic dia afaka manampy amin'ny fihenanam-pandrenesana ny cholangitis biliary voalohany ary mampihena ny soritr'aretina toy ny reraka, ny kisoa, ny fanaintainana ao an-kibony, ary ny maso sy ny volo maina.
Inona no atao hoe vovoka poakaty Obeticholic
Adilabola aduleraire matetika ho an'ny ozirôbiozy biliary
Fampidirana voalohany: 5 mg am-bavaka indray mandeha isan'andro
Dosis maina: 5 mg oral indray mandeha isan'andro; raha toa ka tsy mahatratra ny volana febroary amin'ny volana 3 ny fampihenana ny fosilazan'ny alkalinina (ALP) sy / na ny bilirubin tanteraka, ampitomboy ny dosage amin'ny 10 mg orally indray mandeha isan'andro
Maximum dosage: 10 mg / andro
Fampiasana: Ho an'ny fitsaboana cholangita biliary voalohany:
- Ny fitsaboana amin'ny olon-dehibe tsy afaka mandefitra ny asidra ursodeoxycholic (UDCA)
- Miaraka amin'ny UDCA amin'ny olon-dehibe miaraka amin'ny valinteny tsy ampy amin'ny UDCA
Ny tsy fahampian-tsakafo miverimberina (Child Pugh Class A): Tsy misy fanitsiana voatondro.
Meny fitetezana Fitaovana manokana Hamorona kaonty Hiditra Valam-pejy Lahatsoratra dinika Ny '' skin '' Voasintona
- Dingana voalohany: 5 mg am-bavaka indray mandeha isan-kerinandro
-Manaraka ny dosie: 5 mg am-bavaka indray mandeha isan-kerinandro; Raha toa ka tsy nahomby ny fatran'ny 3 volana ny ADN sy / na ny bilirubin tanteraka, dia ampitomboina ny dosage amin'ny 5 mg 2 isan-kerinandro (fara fahakeliny 3 andro ankoatra azy), ary avy eo amin'ny 10 mg 2 in-droa isan-kerinandro (fara fahakeliny 3 andro voatokana ) arakaraka ny valinteny sy ny fandeferana
-Momba isa: 10 mg / andro
- Tokony hojeren'ny ray aman-dreny ny fisehoan-javatra mifandray amin'ny aretina mifandray amin'ny fo
- Ny mety ho loza mety hitranga dia tokony hohajaina amin'ny tombotsoan'ny marary miaraka amin'ny tantaran'ireo fanehoan-kevitra miverimberina eo amin'ny aretina.
Ireo marary miteraka pruritus:
- Mampiasà firafetan-jiro miora antihistamine na poezia
- Tsindrio ny dosage amin'ny 5 mg isaky ny andro hafa (marary tsy manara-penitra isan'andro ny 5 mg) na 5 mg am-bavaka indray mandeha isan'andro (marary tsy manam-paharetana amin'ny 10 mg isan'andro)
- Mampitsahatra ny fitsaboana hatramin'ny herinandro 2, ary atsangano indray amin'ny doka ambany kokoa
- Tsindrio ny fijanonana amin'ny marary miaraka amin'ny pruritus maharitra sy tsy azo ihodivirana.
Ahoana no ataon'ilay vovobony asidika?
Ny kômônina Acid oxygénique dia ampiasaina irery na miaraka amin'ny ursodiol (Actigall, Urso) mba hanasongadina ny cholangitis biliary voalohany (PBC, karazana aretina iray manimba ny valanorano, izay mamela ny marary hijanona amin'ny aty ary mahatonga ny fahasimbana) amin'ny olona izay tsy afaka mitondra ursodiol na any amin'ny olona izay tsy voatsabo tsara amin'ny ursodiol irery. Ny vovo-dronono Acidicolique dia ao anatin'ny kilasy misy fanafody antsoina hoe agonists farmeroid X. Miasa amin'ny fampihenana ny famokarana kilaoty ao amin'ny atiny izany ary mampitombo ny fanesorana kilaoty avy amin'ny aty.
Alohan'ny handraisana ny vovo-dronono Obeticholic dia lazao amin'ny dokotera na pharmacista raha tsy mahazatra azy ianao, na raha misy alèjy hafa. Ity vokatra ity dia mety ahitana zavatra tsy azo ampiasaina izay mety miteraka fanehoan-kevitra na olana hafa. Miresaha amin'ny mpampiofana anao mba hahafantarana bebe kokoa.
Alohan'ny fampiasanao an'io fanafody io, lazao amin'ny dokotera na pharmacista ny tantaran'ny fitsaboana, indrindra indrindra: ny fanakanana ny fantsom-pahotana.
Alohan'ny handidiana azy dia lazao amin'ny dokotera na ny dokotera anao ny vokatra rehetra ampiasainao (anisan'izany ny fanafody fitsaboana, fanafody tsy voatery, ary vokatra manitra).
Tsy maintsy ampiasaina mandritra ny fitondrana vohoka ny dokotera rehefa ilaina izany. Ifanakalozy hevitra ny loza sy ny tombony amin'ny dokotera.
Tsy fantatra raha mandalo amin'ny rononon-jaza ity fanafody ity. Miangavy anao hitsidika ny dokotera.
Manana fiantraikany mahatsiravina ve ny vovo-dronono moka
Ny fahakiviana, ny fanaintainan'ny vavany na ny tendany, na ny fifandimbiasana haingana / tongotra dia mety hitranga. Raha toa ka misy farany na ratsy kokoa ny vokany, dia lazao avy hatrany ny dokotera na ny pharmacist.
Tsarovy fa ny dokotanao dia efa nandrara io fanafody io satria noheveriny fa ny tombontsoa ho anao dia lehibe noho ny mety ho fiantraikany. Maro ny olona mitsabo an'io fanafody io dia tsy manana fiantraikany ratsy.
Na dia io fanafody io aza no ampiasaina mba hanasongadinana ny kolikoly voalohany (PBC), dia mety miteraka fihenanana amin'ny soritr'aretina. Lazao avy hatrany ny dokotera raha toa ka manana soritr'aretina toy ny vaovao na miharatsy ny hoditra mangatsiaka ianao, ny fihinanan-kena sy ny tsy fahampian-tsakafo, ny fahaverezan'ny alahelo, ny fanaintainan'ny vavony / ny vavony, ny maso / ny hoditra, ny dite matavy, ny aretin-kozatra, / tongotra / kibo, na fiovana ara-tsaina / toe-tsaina. Ny dokotera dia afaka mandefa medikaly hafa toy ny harena azo oharina amin'ny antibody na antihistamines, na hampitsahatra / hampihenana ny dosage fanafody mba hanampy amin'ny fitantanana voka-bary hafa. Miresaha amin'ny dokoteranao momba ireo loza mety hitranga sy ny tombontsoa azo avy amin'ny fanafody.
Tena tsy fahita firy ny fihetsika mahakasika io zava-mahadomelina io. Na izany aza dia raiso ny fanampiana ara-pitsaboana raha mahita marika amin'ny fihetseham-po mahery vaika iray ianao. Anisan'izany ny: manempotra, manify / manindrona (indrindra amin'ny endrika / loha / tenda)
Tsy lisitra feno ny mety ho fiantraikany. Raha mahatsikaritra zavatra hafa tsy voalaza etsy ambony ianao dia mifandray amin'ny dokotera na pharmacista anao.
Ahoana ny hividianana vovo-dronono Acidic avy any AASraw
Resin-tsakafo voajanahin'ny Obeticholic